Kedu ihe ị ga-eyi akwa jaket - jeans, akpụkpọ anụ, ajị anụ, mkpuchi, ụdị okpu, ịchafụ, akpụkpọ ụkwụ kwesịrị ekwesị?
Na ihe ị ga-eyi jaket na-acha uhie uhie - nhọrọ nke foto nke ụmụ nwanyị na-achacha acha uhie uhie
Mgbe ị na-ahọrọ uwe elu, ọtụtụ ndị inyom chọrọ itinye agba na oyiyi ha. Ọtụtụ mgbe, na nke a, nhọrọ ahụ na-adaba na akwa na-acha uhie uhie, nke na-adọrọ mmasị onye nwe ya mgbe nile. Ihe nlereanya a dị ezigbo mma ma na-adọrọ mmasị, Otú ọ dị, ọ bụghị ụmụ nwanyị niile maara otú e kwesịrị isi yie ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Kedu ihe ị ga-eyi akwa jaket nwanyi?
Ajụjụ na ihe ị na-eyi akwa jaket, na-apụta na ọtụtụ ndị na-anọchite anya mmekọahụ. Site n'onwe ya, ihe a na-egbuke egbuke, na-adọrọ adọrọ ma mara mma, n'ihi ya, ọ pụghị iyi uwe "mkpu" ndị ọzọ. Ya mere, a ghaghị ijide ihe ndị ọzọ niile nke ihe ejiji ahụ ma mee ka ọ bụrụ ihe ọ ga-ekwe omume ka anya ghara ịdị na-eme ihe dị njọ. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụghị onyinyo uhie niile.
Dabere na afọ, ọnọdụ mmadụ, ụdị ọdịdị na mmasị onye ọ bụla, nwanyị ọ bụla nwere ike ịhọrọ agba aja ma ọ bụ na-egbuke egbuke nke ga-adịrị mfe ijikọta na ihe ndị ọzọ. Ọtụtụ mgbe ajụjụ banyere ihe ị ga-eyi akwa jaket uhie, na-ebili n'ime ụmụ agbọghọ n'oge oyi. N'okwu a, isi ihe isi ike na-ejikọta na nhọrọ nke ngwa - nkọwa ndị a na-ekpebi ọdịdị nke look'a fashionable na ihe onye nwe ya ga-emepụta na ndị ọzọ.
Uhie Red Denim
A na-ahụkarị ndị uwe ojii si denim na ụmụ nwanyị. Nkà na ụzụ nke oge a na-enye gị ohere ịme ihe a na agba dịgasị iche iche, gụnyere, na-egbukepụ egbukepụ, na-adọrọ uche na onye nwe ya. Ya mere, dịka ọmụmaatụ, a ga-eyi akwa jupị na-acha uhie uhie uhie ka ị na-eje ije na ụbọchị okpomọkụ n'oge, mgbe ị na-enweghị uwe elu, ị nwere ike inwe nkụda mmụọ. N'oge oyi, ị nwere ike na-eyi ezigbo ihe nlereanya na akwa lining, nke na ọtụtụ ikpe na-akwado site aji aji ma ọ bụ sheepskin.
Ihe abụọ ndị a nwere ike iji ejiji na- acha uhie uhie na-acha anụnụ anụnụ na ọkwá ojii, warara ala. N'okpuru jaket dị na nke a, a na-atụ aro ka ị yikwasị ụrọ, uwe elu ma ọ bụ mgbochi - nhọrọ ga-adabere n'ọnọdụ ihu igwe na ikuku ikuku. Maka akpụkpọ ụkwụ, ọ nwere ike ịbụ ihe ọ bụla.
Dịka ọmụmaatụ, akwa jaket na-acha uhie uhie na-eji akwa akpụkpọ anụ ga-ele anya na akpụkpọ ụkwụ ya na akpụkpọ ụkwụ ya, akpụkpọ ụkwụ ya ma ọ bụ obere akpụkpọ ụkwụ ya. A na-ejikarị ngwongwo ọkụ dị na sneakers, sneakers, moccasins na akpụkpọ ụkwụ ndị ọzọ na-adịchaghị mma. Ị nwere ike mezue oyiyi a na akpụkpọ ụkwụ na akwa ụkwụ ụkwụ ma ọ bụ ihe nkedo - na nke a, ọ ga-aghọkwu nwanyị, mara mma na ihunanya.
A na-acha uhie uhie uhie
Ngwaahịa nke ezigbo akpụkpọ anụ ọbụna na-egbukepụ egbuke egbuke anya dị nnọọ mara mma ma mara mma. Ya mere, jaket na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na ajị anụ nwere ike ịghọ nhọrọ nke nwanyị na-azụ ahịa, n'ihi na ọ na-adaba na uwe na-edozi anya, akwa akpụkpọ ụkwụ na azụmaahịa.
Ụmụ agbọghọ na-ahọrọ ụdị ụzọ n'okporo ámá na uwe kwesịrị inye ha mmasị na ụdị na-arụ ọrụ biker. Na-eche ihe ị ga-eyi jaket akpụkpọ anụ uhie nke atụmatụ dị otú a, a ghaghị icheta na ihe ndị a na-eme ka ọ dị mkpụmkpụ, n'ihi ya, a na-atụ aro ha ka ha jikọta ya na akwa akwa ma ọ bụ jeans.
Red jaket na aji
Nzuzu ikpochapu nwere ike ime ihe obula, obuna nke kachasi mfe, isiokwu nke uwe ejiji ndi nwanyi bu ihe di nma magburu onwe ya. Nwa akpa nwanyị na-acha uhie uhie na ajị anụ abụghị otu. N'ihi onyonyo juputara na njedebe magburu onwe ya, ihe ndị dị otú ahụ zuru oke maka ndị inyom na ndị inyom na-ahụ n'anya, ha jikọtara ya na uwe na ejiji nke ụdị dị iche iche ma nwee ike icho mma ọ bụla, ọbụna onyinyo mgbede .
Ka ọ dị ugbu a, ọ bụghị ụdị anụ ọkụ ọ bụla dị mma na-acha uhie uhie na ọtụtụ shades. Akpokwasị ndị na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na-acha odo odo, nke nwere agba pụrụ iche, na-ewere na nhọrọ kacha mma. Ọ dị mma nke ọma na ụdị akwa aji isi, agba aja aja, acha ọcha ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ.
Uwe uhie uhie uhie
Ekeji ndị inyom na-acha uhie uhie, nke a na-eji ihe ọkụ ọkụ, - nhọrọ kachasị mma maka ọdịmma nke ọ bụla n'oge oyi na nkeji oge. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụmụ agbọghọ nwere obi ike na nhọrọ a bara uru naanị maka ihe ndị mara mma, n'eziokwu ọ bụghị ya. Ka o sina dị, onye ọ bụla fashionista, n'agbanyeghị ogo ya, ọ dị mkpa ka ị mara ihe ị ga-eyi akwa jaket na-acha uhie uhie, ka ị ghara iji ụzọ nke ihe oyiyi ndị ọzọ họrọ.
Nhọrọ kachasị mma maka "ndị na-akpụgharị" bụ uwe elu ma ọ bụ jeans nke onyinyo dị iche iche - acha anụnụ anụnụ, nwa ma ọ bụ ọcha. Ụdị dị otú ahụ kachasị mma na akpụkpọ ụkwụ dị mma na lacing. Ọ bụghị ihe ọjọọ ga-ele anya na ejiji taa polosapozhki "chelsea". Maka akpụkpọ ụkwụ nwere akwa ụkwụ ma ọ bụ obere osisi, n'ọnọdụ a, ọ gaghị adị mma ma, na mgbakwunye, nwere ike ịkpata nchekasị siri ike.
N'elu uwe na ejiji, a pụkwara ịchọta uwe elu ndị a, Otú ọ dị, ọ bụ naanị ụdị a ga-eme nke a. Ya mere, mgbe ị na-aza ajụjụ banyere ihe ị ga-eyi jaket na-acha uhie uhie, ndị stylist na-aza n'ụzọ doro anya na uwe mwụda ma ọ bụ ọnụ nke uwe ahụ iji jikọta uwe elu a kwesịrị inwe ọdịdị trapezoid na ndò na-enweghị atụ - agba ntụ, nwa ma ọ bụ beige.
Red patent akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ
Otu jaket na-acha uhie uhie nke ụmụ nwanyị nwere oghere dị ọcha bụ otu n'ime ihe ndị kasị dị irè nke uwe elu maka ezi ndị inyom. Na ngwaahịa a siri ike ịhọrọ akụkụ ndị ọzọ nke ihe oyiyi ejiji, Otú ọ dị, enwere ike ịnweta nhọrọ, dịka ọmụmaatụ:
akwa akwa ma ọ bụ jeans, uwe na akpụkpọ ụkwụ na-ekpuchi na akpụkpọ ụkwụ. N'okwu a, akpụkpọ ụkwụ, nkwonkwo akpụkpọ ụkwụ, ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ dị mma ịhọrọ nwa, ọ bụ ezie na a na-anakwere ụdị dị na ụda nke uwe elu;
a na-acha odo odo ma ọ bụ na-acha odo odo, na-ekpuchi ọkụ na-acha ọkụ na nke ọma na ihe ndị dị mma. Na oyi ihu igwe, a nwere ike ịgbakwunye ihe oyiyi a na-acha uhie uhie;
ejiji ma ọ bụ uwe ejiji na agba ntụ na akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na nnukwu bootleg. Mgbe ị na-aza ajụjụ maka ihe ị ga-eyi uwe mkpuchi ọbara ọbara, nke a bụ otu n'ime ihe kachasị amasị. Ọ na-adọrọ nnọọ mmasị ma na-adọrọ mmasị, ọ pụkwara ịdị mkpa n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ ọ bụla.
Eche jaket na mkpuchi
Ebube na-acha uhie uhie ndị inyom na mkpuchi - nhọrọ kacha mma maka ọnọdụ ihu igwe ọ bụla. N'ime ya ị nwere ike ịga ahịa, gaa ije ma ọ bụ izute ndị enyi, ọrụ ma ọ bụ n'obodo. Ụdị mkpuchi dị otú ahụ bụ nke zuru ụwa ọnụ, n'ihi ya, ọ nwere ike jikọta ya na ihe eji akwa ákwà dị iche iche. Ya mere, iji zaa ajụjụ banyere ihe ị ga-eyi akwa akpa uhie na mkpuchi, ọ ga-ekwe omume dị ka ndị a:
na ndụ kwa ụbọchị, ngwaahịa a kacha mma jikọtara ya na jeans ma ọ bụ uwe akwa, eriri ọnụ na akpụkpọ ụkwụ dị mma na akwa akwa;
n'oge ezumike ezumike, ọ ga-eyi uwe na ejiji - ntanya na chaa chaa . Ịkwado ihe oyiyi dị otú ahụ na-akwado ndị sneakers ma ọ bụ sneakers;
ndị na-agụ akwụkwọ n'oge ochie ga-eji otu jaket, uwe ejiji oge ochie na uwe mwụda nke ezi ákwà. Iji mee nke a ka ọ bụrụkwuo nwanyị, a na-atụ aro ka ị gbakwunye ya na akpụkpọ ụkwụ na ikiri ụkwụ ma ọ bụ osisi.
Ogige ugbo uhie uhie
Ogwe uhie uhie uhie uhie uhie uhie na-adi nma n'ile ya ma obu akwa akwa ya na egbugbere ya. Iji nweta nchapụta na nkwupụta nke onyinyo ahụ, ọ nwere ike ịgbakwunye sneakers ma ọ bụ sneakers na ụda uwe elu na akpa azụ azụ. Tụkwasị na nke a, a na-ejikọta ihe nlereanya a n'ụzọ zuru ezu na akwa akwa ma ọ bụ jeans na nwa na akpụkpọ ụkwụ na traktọ naanị. Enwere ike ịchọta ihe ndị ọzọ na-ahụ anya ma na-ele anya site na ijikọta jaket-ogige ahụ n'otu onyinyo ya na uwe mpempe akwụkwọ, akwa uwe na akwa akpụkpọ ụkwụ na imi dị nkọ na oke elu.
Ngwa maka jaket uhie
Na-eche banyere ihe ị ga-eyi uwe nwa agbọghọ na-acha uhie uhie, ị ghaghị iche echiche nke ọma banyere nhọrọ nke ngwa. Mgbe mgbe, ntakịrị nkọwa ndị a na-enye ọnọdụ ahụ n'oyiyi dum ma metụta mmetụta nke nwa agbọghọ ahụ na-eme ndị ọzọ. N'ihi nke a, ndị na-emepụta ihe na-emepụta ọtụtụ ndụmọdụ bara uru, na ihe ha ga-eyi jaket na-acha uhie uhie na ngwa.
Kedu okpu ọ dị mma maka jaket uhie?
Ajụjụ banyere agba agba dị mma maka jaket uhie bụ otu n'ime ihe siri ike. Ya mere, nhọrọ dị mma bụ nhọrọ nke isi mkpuchi na ụda uwe elu, Otú ọ dị, ọ pụrụ isi nnọọ ike ịhọrọ. Mgbe ị na-ahọrọ mkpuchi ndị ọzọ, ị ga-eduzi agba nke akụkụ ndị ọzọ nke ihe oyiyi ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na nwa agbọghọ na-eyi akwa jeans na-acha anụnụ anụnụ, ọ nwere ike iji ihe na-acha anụnụ anụnụ gbakwunye ya. Akpụ isi ojii ma ọ bụ nwa ojii kwesịrị ekwesị maka akwa uwe ojii, na maka uwe ejiji nke nwanyị - na ngwa nke ọcha, agba aja aja ma ọ bụ ude.
Kedu ịcha akwa dị mma maka jaket uhie?
A na-ahọrọ ịchafụ maka jaket na-acha uhie uhie mgbe a na-azụta ákwà isi. Ụdị ihe dị mma nke ngwa ngwa ndị yiri ya, Otú ọ dị, nke a anaghị emetụta okwu ahụ ma ọ bụrụ na okpu ahụ jikọtara na ụda nke uwe elu. Tụkwasị na nke ahụ, na ọnọdụ ọ bụla, ị nwere ike ịhọrọ ụfụ ụda ma ọ bụ okpukpu ụda multicolor, nke nwere ike ịchọta ụda ụda.
Akpụkpọ ụkwụ maka jaket uhie
A na-ejikarị jaket na-acha uhie uhie jikọtara ya na ọtụtụ akpụkpọ ụkwụ, nke nwere ike ịnweta ndò na-enweghị atụ na-egbuke egbuke. Oge gboo bụ ejiji akpụkpọ ụkwụ a, akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ nke agba agba - agba ọcha, nwa ma ọ bụ beige. Ọ bụrụ na a kwadoro onyinyo ahụ niile n'àkwà dị jụụ, ọ nwere ike ịgbakwunye akpụkpọ ụkwụ nke otu agba na uwe elu. Tụkwasị na nke ahụ, ọ na-akpali mmasị ịhụ ụyọkọ akpụkpọ anụ na-acha uhie uhie na akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ moccasins nke acha odo odo ma ọ bụ emerald agba, yana ederede agụ owuru.
Egwuregwu Jeans - ihe nzuzo dị mfe nke ịmepụta ihe oyiyi ụwa
Ugboro abụọ maka Halloween
Kedu ka esi esi akwa ụfụ?
Uwe ejiji na oge niile
Ihe oyiyi maka Halloween maka nwa agbọghọ
Uwe oriri Pirate - akwa akwa maka ụmụ agbọghọ
Ụkpụrụ iwu maka ụmụ agbọghọ
Kedu ihe ga-eme golphins?
Mmiri mmiri almọnd dị mma na ihe ọjọọ
Ịmụ nwa mgbe afọ 40 gasịrị
Ntụziaka maka ihe na-esi ísì ụtọ
Kedu ihe bara uru maka raspberries maka ahụ?
Senada maka akwalata
Ihe Omume nke Ịtali na Russia
Mgbu n'obi na mkpali
Ezigbo Wall Venice
Iwu iwu maka ụmụaka
Enwere m ike ịkwụsị ibu arọ na mụọ?
Ejiri aka gị na-eji ejiji
Ngwọrọgwu ndi mmadu maka ntutu isi
Ọgwụgwọ nke thrombosis
Isi na refrjiraeto - olee ngwa ngwa iji tufuo ísì ọjọọ?
Esi esi na phytophthora gbaa tomato?
Kedu ka esi dina ala?
Tea si na St. John wort dị mma na ihe ọjọọ
Ogwe ihe ịchọ mma nke ụlọ